10 Izindawo Zomshado Ezimangalisayo EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izindawo Zomshado Ezimangalisayo EYurophu
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba eScotland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Ngaphandle kokukhetha ingubo, noma isudi, ukuhlela umshado kuyinselele kunoma yimuphi umbhangqwana. Kusukela kuhlu lwezivakashi kuya endikimbeni, kunemininingwane eminingi eyenza usuku lube yimpumelelo. Nokho, the wedding destination is one of the top things to decide on. Lezi 10 amazing wedding destinations in Europe offer the top wedding venues for the most magical wedding day.
1. Amazing Wedding Destinations: Umshado EParis
Ophahleni lwaseParis, chateaux, and sophisticated charm create the most magical atmosphere for a wedding. Yingakho, the French capital is a popular indawo yohambo lwezithandani and a top wedding destination. Ngaphezu kwalokho, you can easily move from serving foie gras in your reception to sipping champagne with the views of the Eiffel Tower on the honeymoon.
Ngenkathi iParis iyindawo yomshado emangalisayo, kufanele ucabange ukuthi iParis ingenye yezindawo zomshado ezibiza kakhulu eYurophu. Ngakho, a wedding in Paris is an amazing choice for couples that want to splurge on their wedding and guests.
5 Izindawo Zomshado Ezinhle eParis:
Izindawo zokuhlala e- Esclimont
I-Barry Music Pavilion
Ukwenza izinyathelo zakho zokuqala njengombhangqwana oshadile ngaphansi kwezivini kuyindlela enhle yokuqala umshado. Amagquma aseTuscany, i-pasta eyenziwe ngezandla, newayini elibomvu, yizizathu ezimbalwa kuphela ukuthandana e-Italy. Ngamanye amazwi, I-Tuscany iyindawo ongenakulibaleka yokugubha uthando lwakho nabangani abaseduze nomndeni.
Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi indawo oyikhethayo, intwasahlobo yisikhathi esingcono kakhulu somshado eTuscany. Izizathu yilezi; isimo sezulu sihle futhi sinethezekile emicimbini yangaphakathi noma yangaphandle, futhi izivakashi mahhala. Ngakho-ke, uma usuvele unqume ukushada eTuscany, okudingeka ukwenze ukukhetha indawo yomshado. Ukusuka ezindlini zikanokusho eziseVal d'Orcia kuya ezindlini zasemaphandleni ezinhle, kunezindawo eziningi zomshado zanoma yimuphi umqondo kanye nesabelomali.
5 Izindawo Zomshado Zothando ETuscany:
Izindawo zokuhlala e-Castiglion del Bosco
Izindawo zokuhlala e- Vignamaggio
Izindlu e- Cornacchi
Izindawo zokuhlala e- Nano
Izakhiwo zasendulo ezigcinwe kahle, umlando ocebile, kanye nezakhiwo ezihehayo, I-Edinburgh iyindawo yomshado enhle kakhulu e-UK. Ngaphezu kwalokho, imitapo yolwazi emidala, amahholo okwamukela izivakashi, futhi izinqaba medieval, phakathi kwamahlathi nezihlahla eziluhlaza, yizindawo zomshado ezinhle.
Iqiniso alikhulume, I-Edinburgh iyidolobha elijabulisayo neliphilayo, mhlawumbe indawo ephilayo kunazo zonke eScotland, ukuhlinzeka ngesimo esihle kakhulu sesenzakalo esijabulisayo. Ngaphezu kwalokho, I-Edinburgh mhlawumbe ukuphela kwendawo oya kuyo eYurophu lapho uzothola khona izinqaba, izindlu zamapulazi, namahhotela akhethekile omshado wakho omangalisayo.
5 Izindawo Zomshado Eziyingqayizivele E-Edinburgh:
Amageza Ka Dr Bells
I-Royal College of Physicians
4. Ichibi Bled, I-Slovenia
Ngokubuka okuhle kwechibi nezintaba ezizungezile, ILake Bled ingenye yezindawo zomshado zothando kakhulu eYurophu. Ngaphezu kwalokho, isici esikhethekile kunazo zonke eLake Bled yisiqhingi esincane enkabeni yaso kanye nesonto elihle kakhulu. Isonto lesiqhingi liyindawo enhle yomshado osondelene womphakathi nowesonto, ngesikebhe sokufinyelela ezweni.
Ngaphezu kwesilungiselelo esithandekayo, I-Lake Bled iyindawo enhle ye-honeymoon. Ngale ndlela, ngqo kusuka ereception kanye nephathi kwelinye lamahhotela aphambili, ungase uthathe umhlalaphansi uye kukhabethe lakho emanzini noma ku-honeymoon suite. Ngaphezu kwalokho, I-Lake Bled inikeza eziningi zothando izindawo zepikinikini, izintaba, kanye nemisebenzi yezemidlalo yamanzi yezinkumbulo zokuphila konke.
5 Izindawo Ezimangalisayo ELake Bled:
I-Grand Hotel Toplice
Isonto leBled Island
Izindawo zokuhlala e-Bled Lake
I-Bled Lake Castle
5. Amazing Wedding Destinations: Ichibi Como
Izingadi zase-Italy ezishayayo ezigcina emanzini, amasimu othando anokubukwa kwechibi, I-Lake Como iyinto engakholeki indawo yothando eYurophu. Ngakho, I-Lake Como inikeza isilungiselelo esihle kakhulu somcimbi womshado nezithombe zomshado ezinhle kakhulu.
Ngaphezu komklamo omuhle nesitayela sezindawo zomshado eLake Como, Ama-villas ase-Italy eduze nechibi alungele amaqembu omakoti nabakhwenyana. Indawo ngayinye eLake Como inokufinyelela okuqondile ngesikebhe. Ngakho-ke, umbhangqwana ojabulayo ungahlela amaphathi angalibaleki we-bachelor kanye ne-bachelorette uma uhlela umshado wasehlobo eLake Como. Ngezansi, Ichibi Como iyindawo yomshado emangalisayo, lapho i-“dolce vita” iqala khona ngempela ngombhangqwana ojabulayo obopha ifindo.
5 Izindawo Zothando ELake Como:
lapho i-“dolce vita” iqala khona ngempela kumbhangqwana ojabulayo obopha ifindo
I-Tenuta La Madonnina di Barni
Ihhotela laseMandarin Oriental
6. lapho i-“dolce vita” iqala khona ngempela kumbhangqwana ojabulayo obopha ifindo
lapho i-“dolce vita” iqala khona ngempela kumbhangqwana ojabulayo obopha ifindo, lapho i-“dolce vita” iqala khona ngempela kumbhangqwana ojabulayo obopha ifindo. Izinqaba, nezingadi eziwubukhazikhazi ezintabeni ezinhle zase-Ireland, lapho i-“dolce vita” iqala khona ngempela kumbhangqwana ojabulayo obopha ifindo. Futhi na ngaphezulu, izinqaba ezinhle ziyingxenye yomlando ocebile wamaGaelic e-Ireland futhi zishintshile zisuka ezinqabeni zasendulo., lapho i-“dolce vita” iqala khona ngempela kumbhangqwana ojabulayo obopha ifindo, lapho i-“dolce vita” iqala khona ngempela kumbhangqwana ojabulayo obopha ifindo.
Ngenxa yalokho, izinqaba ziyindawo enkulu yomshado, hhayi kuphela ngenxa yesimo sabo nesimo sothando kodwa futhi ngenxa yobukhulu bazo. Ngakho, izinqaba eziningi nezithabathaba e-Ireland zingakwazi ukuhlalisa izivakashi zonke’ uhlu lwempelasonto yomshado. Nokho, uma uthanda iphathi yomshado esondelene kakhulu, kwase kuba amadolobhana amahle nezithabathaba zase-Ireland, uzojabula ukusingatha umshado wakho wamaphupho.
5 Izindawo Zomshado Ezimangalisayo E-Ireland:
I-Belle Isle Castle
Izindlu e- Clanwilliam, Co. Wicklow
Izindlu e- Drumhalla, Co. I-Donegal
Abancane, funky, izitayela, futhi engavamile, IBerlin iyindawo enhle yomshado yabashadikazi abasebasha nabanesibindi. Ngenkathi imibhangqwana eminingi ikhetha indawo yakudala yothando yosuku lwayo olukhulu, njengeParis noma iLake Como, I-Berlin iyindawo engavamile yokuya emishadweni. Idume ngamabha ayo, isigameko sasebusuku, nokuphila kwasebusuku okumnandi, I-Berlin inokuningi okunikezwayo endaweni yomshado, kunokuba nje indawo enhle ye-bachelor kanye ne-bachelorette.
Ngokwesibonelo, IBerlin inothile emlandweni, futhi iningi lezakhiwo zalo zomlando ezinkulu zigcinwe kahle, enikeza izindawo ezinhle zakudala zomshado osondelene. Ngokolunye uhlangothi, ezinye izindawo zinikeza ukubukwa okuhle kwedolobha futhi ziyizindawo ezinhle zomshado zangaphandle, ephelele umshado ehlobo. Ngakho, naphezu kokuba inhloko-dolobha ye-funk, IBerlin iyindawo yomshado emangalisayo eYurophu, kubashadikazi be-rock star, ngokuthinta i-glam.
Izindawo Zomshado Ezinhle Kakhulu EBerlin:
Ngamabhuloho abukekayo, izimbali yonke indawo, kanye nokubukwa okungajwayelekile kuyo yonke i-engeli, I-Amsterdam iyindawo yomshado emangalisayo. Inhloko-dolobha yaseDutch inobungane, ukuhamba kalula, nedolobha elimibalabala. Ngaphezu kwalokho, Amsterdam kuyinto Idolobha elilungele i-LGBT futhi yemukela yonke imibhangqwana efisa ukumemezela uthando lwazo emhlabeni.
Ngaphezu kwalokho, uma kwenzeka uhlela umshado ngesabelomali, imishado imahhala ngoLwesibili. Ngakho, pakisha abangani bakho abakhulu, nabazali, ngomshado obuseduze futhi ekhumbulekayo kwelinye of 10 izindawo zomshado ezimangalisayo eYurophu.
Phezulu 5 Izindawo Zomshado E-Amsterdam:
Indawo yokudlela yase-Kas
9. Amazing Wedding Destinations: E-Bavaria, Germany
I-rustic landscape, ukubukwa kwentaba, kanye nobuhle bemvelo baseBavaria bakha isilungiselelo esihle kakhulu somcimbi womshado osondelene. Ngaphezu kwalokho, E-Bavaria ingenye yezifunda ezinhle kakhulu futhi ezinkulu eJalimane. Ngakho, uzoba nobumfihlo obuphelele ukuze ujabulele usuku lwakho endaweni enkulu yangaphandle yaseBavaria.
Ngaphezu kwalokho, I-Bavaria ingenye yezindawo ezinhle kakhulu eJalimane, kusukela ebusika kuze kufike ehlobo. Ngale ndlela, ungase ube nomshado wasebusika endaweni yezimanga ezimhlophe ezineqhwa, noma wamukelekile entwasahlobo ezintabeni eziqhakaza ezizungeze. Noma kunjalo, izithombe zakho zomshado, futhi umcimbi uzoba okhethekile kakhulu.
3 Izindawo Zomshado Ezimangalisayo EBavaria:
5* Ihhotela laseSteigenberger Sonnenhof
I-EYRICHSHOF CASTLE Inqaba
10. Izindawo Zomshado Ezimangalisayo EYurophu: Izintaba zase-Austrian Alps
Wonke umhambi oya e-Austrian Alps uthanda izintaba uma uthi nhlá, ngakho kungani ungashadi kule ndawo emangalisayo. Njengesithombe esiqondile esivela kumagazini womakoti, izithombe zakho zomshado ezintabeni ezinokuthula ze-alpine, noma amachibi ahlanzekile, i-Austrian Alps iyindawo yomshado ongenakulibaleka.
Phakathi komshado we-ski ebusika, emshadweni wasentwasahlobo, ziningi izindawo zomshado ongakhetha kuzo. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukuhlela umcimbi ongaphandle eweni, ngemibono yezintaba, noma ku-chalet ebukekayo nabangane bakho abambalwa abaseduze ngaphezulu kwe- ngempelasonto uthole e-Alps. Umugqa ophansi, kusuka ekukhonzeni i-Schnitzel endaweni yokwamukela, ukudansa ngaphansi kwesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi, umshado e-Alps umshado inganekwane ekwenzeni.
3 Izindawo Zomshado Ezinhle E-Austrian Alps:
I-Maierl Alm kanye ne-Chalets
Sizokujabulela ukukusiza ukuthi uhlele uhambo lwesitimela sothando ukuya lapho uya khona emshadweni, Vele ungene GcinaATrain.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi yethu “Izindawo Zomshado Eziyi-10 Ezimangalisayo EYurophu”Kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Famazing-wedding-destinations-europe%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ezothando	Amazing weddingdestinationseurope	indawo yomshado enhleeurope	ezothando	umshado	Izindawo Zokushada
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Poland, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe